Afhayeenka wasaaradda amniga Qaranka ee xukuumada Somalia Maxamed Yuusuf Cismaan ayaa faahfaahin ka bixiyey iska horimaad culus oo xalay ka dhacay guri ku yaala xaafada Buulo Xuubey ee degmada Wadajir.
Maxamed Yuusuf ayaa intaa ku daray in ciidamada nabad sugida ay weerar ku qaadeen gurigaas ka dib markii ay heleen xog ku saabsan in lagu qarinayo hub loo waday xoogaga Al-shabaab, taasoo uu sheegay iney ka heleen dadka degaanka.
“Markii ciidamada amaanku tageen gurigaas ayaa waxay iska caabin kala kulmeen kooxo ka Tirsan Al-shabaab oo guriga ilaalo ka ahaa balse markiiba waa laga adkaaday kooxahaas, dhamaantoodna waa la qabtay” ayuu yiri afhayeenka.
Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu sheegay afhayeenku in gurigaas ay ka soo saareen hub aad u fara badan oo kala nooc ah isuguna jiray rasaas, qoryo kala duwan bambooyin iyo qaar kale, isagoo xusay in ciidamada nabad sugida ay isla xalay hubkaas ka rareen gurigaas ayna geeyeen meel amaan ah.
Dadkii isla lahaa hubkaas waa la soo wada qabtay baaritaan ayaa ku socda, sharciga ayaa dhowaan la horkeeni doonaa dhamaantood” ayuu intaa ku daray afhayeenka oo aan soo hadal qaadin khasaaraha nafeed ee ka dhashay iska horimaadka dhacay.
Ugu yaraan afar qof ayaa ku dhintay geeriyooday iska-horimaadkii xalay ka dhacay xaafadda Buulo-xuubeey ee degmada Wadajir, halka qaar kalena ay ku dhaawacmeen.
Dagaalka ayaa yimid kaddib markii ciidammo ka tirsan kuwa nabadsugidda ay weerareen guriga sarkaal ka tirsan ciidamada xoogga dalka, wararka ayaa sheegaya in guriga sarkaalkan uu yaallay hub fara badan oo looga ganacsanayey Suuq madow, taasna ay tahay sababta ay ciidamada nabadsugidda ka tirsan u weerareen gurigaas